Jaalalli dhugaa waan akka salphatti argamu ykn bira gayamuu miti. Namoota bayy’ee xiqqaa ta’aniidha, yoo kan jiran ta’e, kanniin jaalala. Q⁠o⁠ʼannaa Masaraa Eegumsaa Bitootessa , Jaalala gaarii fi Namoonni qarshii jaallatan gammachuu dhugaa kan hin qabaanne maaliifi?.
Author: Tosida Kisar
All Fayyaa fi Hawaasa Jaalala. Baacoo Afaan Oromoo Bookstore. Yeroon gaaffii jaalalaa kana siif uaalala bara waktii gannaa sana baayyee sodaatte! Kan ishee kanaas akkasuma. Ammas hedduun namootaa waan jaalala isaanii gidaara manaan wolitti buusu, galaana dhufaa jiru fudhachiisu irraa fagotti uftiksu. Nagaan akka dursu beeka situ qalbii koo fudhate malee.
Jaalale koo duraan dagachu dadhabe 2. See more of Galmee Jaalala Dhugaa” on Facebook. Koo an kanin jedhu ani nama jaalladhee beeka, warran duukaa jaalala dhamdhamaa tureyyuu baay’eesaanii kaniti beektu ofiinan dhiisee gale. Gaafa Woyyaaneen tooftaa keennatti gammadde tooftaa keenna bira rakkoon jira jechuudha.
Akkan jiruttu Numaan Jira Obsee. Ani jiruun tiyya simalee hin mi’ooytu. Bakka jaalale qabadhu wajjumaan taphadhe dhiisu barbaada 5. Sin jaalladha jedhus jaalala isaa waan ittiin argitu hin qabdu; kabaja dhiirri Jaalallee isaaf qabuu osoo itti hin agarsiisin itti heerumte; akka haadha manaatti osoo hin taane akka warteessuutti ammoo waliin jiraata jirti.
Nama sirritti gaari eega jira Kee kun garuu ammanatti yeroon si faana taphadhee dabarse utuun hin qabaatin attamitti akkas na waxale!
See more of Jaalala Dhugaa on Facebook. Dhiirota Gammachisuuf Waan Afur qofa gochuu si barbaachisaDubartoota Gammachisuuf garuu, Waan shantamaa oli gochuu si barbaachisa Hanga dhumaati dubbisa like fi shar itti roobsa Ani ergan si jaalladhee eegalee hanga harraatti guyyaa tokkollee akka jaalallee kootti harka si qabadhee si waliin bashannanee akkan hin dhugaz ni beekta!
Baay’ee dubbadheef suusii nan baasu. Email or Phone Password Forgot account? Jaalalli anaaf haaraa ta’uu baatullee siif haaraadha! Guca maalummaa dhjgaa See More. Email or Phone Password Forgot account?
Jaalalli dhugaa qabxiilee 10 kanniin ufkeessatti ammata – Awash Post | Oromo News
Aabbush Zallaqee istuudiyoo fiilmii Finfinnee keessatti bane. Shamarreen tokko akka waan hin barbaadamne tokkootti of ilaaluu yeroo jalqabde akka.
TPLF jijjiiramaaf qophiidhaa miti jetti. Osoo hin heerumin mucaa dhiiraa garatti ishee hafe deesse haadha mucaa taate. Dhaabbileen dhuunfaa PLC naannoleef gibira akka kaffalan murtaaye. Bareedun ani barbaadu hanga amma hin dhalanne 6.
Arrabni namaa ‘active’ dha – oduutti ariifata. All Aadaa Bashannana Viidiyoo.
Jaalala Dhandhamadhu Comic Bookstore. Atleet Eebbisaa Ijjiguu fiigicha Kanaadatti geggeeffame irratti Woyyaanee balaaleffate. Afaan Oromoo website Personal Blog. Sitti dhufuuf hangam turullee walarguun kenya hin oolu!
Barattoonni Yunivarsiitii 16 balaa konkolaataan dhuman. TPLF jijjiiramaaf qophiidhaa miti jetti Oct 1, Maatin koo baayye nati dheekamu dhoorku 7.